Accueil > Gazetin'ny nosy > Vatofotsy Antsirabe: Fatim-behivavy hita tao anaty gony
Vatofotsy Antsirabe: Fatim-behivavy hita tao anaty gony
Nahitana fatin’olona tao anaty gony izay voatetitetika teny Vatofotsy faritra avaratr’Antsirabe ny alina ny alarobia hifoha alakamisy. Tranga iray izay tena nampalahelo sy nanohina tokoa satria dia vehivavy tokony ho 35 taona teo ho eo no hita faty tao anatin’ny gony iray. Rehefa nosokafana ny gony dia hita fa vatana voarasarasa tamin’ny antsy, izany hoe, miala ny lohany, tongony sy ny tanany. Tsy fantatra izay nahavita izao asa ratsy izao hatretro fa efa mandeha ny fanadihadiana amin’ izao fotoana izao. Marihina fa efa indroa no misy tranga toy izao, ny voalohany dia tamin’ny volana Jolay 2017 izay teo amin’ity faritra Vatofotsy ity ihany. Nentina teny amin’ny Hôpitaly Atsimo ny razana ary efa nojeren’ny tao amin’ny BMH. Raha araka ny feo miely dia toa vehivavy mpandeha alina ity niharan-doza ity. Nanaitra ny mponina eto Antsirabe ity tranga ity. Azo lazaina ho tanàna tsy milamina intsony Antsirabe satria sady manjaka ny dahalo, ny hala-botry ary izao koa manjaka indray ny vono olona mahatsiravina.
Malaimbandy: Nilahatra ny vahoaka hanongana ny ben’ny tanàna HVM
Tsy hita tao anatin’ny telo volana ingahy Kassamaly Reza izay ben’ny tanàna Hvm (Hery vaovao ho an’i Madagasikara) ao Malaimbandy. Tsy nahenoana vaovao mihitsy na kely aza izy tao anatin’izany ka tsy fantatra na maty na velona. Tsy nisy filazana tamin’ny mpiasa sy ny vahoaka fa dia lasa toa ireny jiolahy mpangalatra ireny hoy ny fitenenana. Tsy nandray vola noho izany ny mpiasa tao amin’ny kaominin’i Malaimbandy, distrikan’i Mahabo, faritra Menabe noho izany. Tsy nisy koa ny fanaovana sonia ny taratasim-panjakana rehetra ary tsy nisy raharaham-bahoaka nandeha araka ny tokony ho izy. Izany no nahatonga ny filaharana nataon’ny vahoaka hanongana azy tsy ho ben’ny tanàna ary nandroaka azy tsy hipetraka ao Malaimbandy intsony hoy ny loharanom-baovao tamin’ny alatsinainy faha 05 febroary 2018 lasa teo.
Tsy ny mahakasika ny fandosirany ity tanàna ity ihany no nitsaran’ny olona azy fa tao koa ny fivarotany tanim-panjakana sy ny famaliana volan’olona. Isan’ny tsy naloan’ity ben’ny tanàna Kassamaly ity ny vola vidin’ny kibota an’i Maharaka. Ireharehan’ingahy ny filazana fa manana an’i Voahangy Rajaonarimampianina miaro azy hono izy.
Isan’ny olana lehibe ao Malaimbandy hoy ny mpiasa ao amin’ny kaominina ny tsy namoriany ny filan-kevitra ny kaominina hatramin’ny fotoana nitondrany tao. Didy jadona no nitantanany kaominina sy ny raharaha rehetra ka izay tiany hatao ihany no notanterahana tao amin’ity toerana ity. Izany no antony nahatonga ireo mpanolotsaina tao amin’ny kaominina nanohana ny fanesorana azy.
Fa mbola olana hafa koa ny mahakasika ny zandriny antsoina hoe Dinesh izay nataony ben’ny tanàna lefitra tao Malaimbandy. Nohon’ny raharaha tsy manjary ataony dia tafiditra amin’ny raharaha antsoina hoe “ fira ambany” na “kidnapping” izay ataon’ny dahalo ity olona ity amin’izao fotoana izao. Voatazona vonjy maika ao amin’ny fonjan’i Morondava ity ben’ny tanàna lefitra ity izao nanomboka tamin’ny faran’ny taona 2017 teo iny. Ary toa izany aza hono no antony nandalovan’ingahy Kassamaly tao Malaimbandy izao.
Tonga tany Malaimbandy ny lehiben’ny distrika avy ao Mahabo sy ny depiote tamin’ny alatsinainy faha 05 febroary 2018 io ary nanatrika izao toe-javatra izao. Andrasan’ny vahoaka mafy ny fihetsika ny fanjakana amin’ity raharaha ity.